Kedu ihe bụ SPC Floor
site na nchịkwa na 21-08-05
Ala ụlọ SPC bụ nkwalite nke taịl Vinyl Tiles (LVT). Emebere ya pụrụ iche na sistemụ mkpọchi “Unilin”. Yabụ, enwere ike itinye ya n'ụzọ dị mfe na ntọala ala dị iche iche. Na agbanyeghị ịtọ ha na simenti, seramiiki ma ọ bụ ala dị adị. A na -akpọkwa ya RVP (vinyl plank siri ike) na Europe na USA. ...
Kwalite na agba osisi nke atụmatụ SPC
site na nchịkwa na 21-07-20
Iji kwado onye ahịa anyị nke ọma ma mee ngwaahịa ahụ nke ọma, anyị na -ebuli mkpokọta agba nke SPC plank na JFLOOR Brand dị n'okpuru: SCL817, SCL052, SCL008, SCL041, kagburu SCL315, SCL275, SCL330, SCL023, SCL367, agbakwunyere ọhụrụ. Ka ọ dị ugbu a, anyị na -emeziwanye idobe ngwaahịa nnweta ...
ETINYE SPC (Vinyl Plank Flooring) na steepụ
site na nchịkwa na 20-12-04
SPC vinyl plank nwekwara ike ịwụnye na steepụ, na ijikọ steepụ ahụ n'ime ụlọ ahụ ga -arụpụta atụmatụ ka mma. Maka Project na DUBAI AMER KALANTER VILLA, anyị ejirila koodu SPC PLANK SCL010 maka ụlọ ahụ niile gụnyere steepụ. Anyị gbakwunyere steepụ n ...
Etu ị ga -esi tinye atụmatụ SPC (vinyl plank flooring) na saịtị CURVE?
Ọrụ YONGDA PLAZA SHANGHAI anyị mere n'oge na -adịbeghị anya na -egosi na atụmatụ SPC dabara adaba maka mpaghara akụkụ. Ntinye ala vinyl maka saịtị curve na -ewe oge karịa mpaghara nkịtị, mana ọ naghị esiri ike na naanị nzọụkwụ ọzọ bụ ịbecha nsọtụ abụọ nke SPC ka ọ bụrụ usoro. ...
A na -ewu ụlọ ngosi ihe ọhụrụ Dubai
site na nchịkwa na 20-07-23
Onye mmekọ JW GTS Carpets & Furnishing na -arụ ụlọ ihe ngosi Dubai. A na-atụ anya na a ga-emepe ụlọ ihe ngosi ahụ na Ọgọst 15, 2020. Na foto atọ mbụ, etinyere ebe a na-egosi ihe ngosi kapeeti Park Avenue-PA04. The Park Avenue col ...
Vinyl Flooring: Ntụziaka ngwa ngwa maka ihe niile ịchọrọ ịma
site na nchịkwa na 20-06-08
Otu n'ime ụdị ụlọ a na -ewu ewu taa bụ vinyl. Ọ dị mfe ịghọta ihe kpatara ala vinyl ji bụrụ ihe eji ewu ụlọ nke ụlọ: ọ dị ọnụ ala, mmiri na-eguzogide na-enweghị ntụpọ, dịkwa mfe nhicha. Nke a na -eme ka ọ dị mma maka kichin, ime ụlọ ịsa ahụ, ime ụlọ ịsa ahụ, ụzọ mbata - ọ bụla ...
Otu esi ehichapu kapeeti
A na -eji kapeeti arụnye ọtụtụ ụlọ, ebe ọ bụ na kapeeti dị mma ịga ije na ọnụ ala ma e jiri ya tụnyere ụdị ala ndị ọzọ. Unyi, unyi, nje na nje na -anakọta na eriri kapeeti, ọkachasị mgbe ụmụ anụmanụ bi n'ụlọ. Ihe mmetọ ndị a nwere ike dọta chinchi ma kpatara ndị bi na ...
Ụlọ nkwakọba ihe ọhụrụ Qingdao bidoro na Nọvemba 11, 2019
JW Kapet na Flooring Co., Ltd kwukwara ụlọ nkwakọba ihe ọhụrụ na Qingdao, China na 11 Nọvemba 2019 iji zute ngwa ahịa na -arịwanye elu na ahịa chọrọ. Mkpokọta mpaghara ụlọ nkwakọba ihe ọhụrụ dị puku mita 2,300 na mpaghara ngwaahịa dị mita 1,800 dị irè. Ụlọ nkwakọba ihe ọhụrụ a nwere 70,000 m2 na -agba ọsọ ...
Otu esi enweta agba emulsion na kapeeti
site na nchịkwa na 20-04-03
Ihe mbụ ị ga -eme bụ ịnwa iji aka wezuga ọtụtụ agba dị ka o kwere mee site na iji nchacha, ma ọ bụ ngwa yiri ya (ngaji ma ọ bụ spatula kichin ga -eme). Buru n'uche na ị na -agbalị iwepụ agba ahụ na kapeeti, na -emegide ịgbasa ya n'ihu. Ọ bụrụ na ịnweghị ...
Otu esi ewepu agba na kapeeti
Ihe mbụ ị ga -eme bụ ịnwa iji aka wezuga ọtụtụ agba dị ka o kwere mee site na iji nchacha, ma ọ bụ ngwa yiri ya. N'agbata scoop ọ bụla, cheta ka ehichapụ ngwa gị kpamkpam tupu ịmegharịa usoro ahụ. Buru n'uche na ị na -achọ iwepụ agba na kapeeti, na -emegide ...